China 80mm Neck Pet Preform ye Edible Oiri Bhodhoro fekitori uye vanotengesa | Dassaw
Kukura kwemutsipa 80mm
Sesangano rine mukurumbira, isu tiri kuita mukugadzira uye kupa huwandu hwakawanda hwe80mm Neck Pet Preform yeEdible Oiri Bhodhoro.. Iyi 80mm Neck Pet Preform yeiyo Inodyiwa Oiri Bhodhoro yakashongedzerwa uye inovimbisa hupenyu hurefu hunoshanda. Isu tiri kupa ichi chigadzirwa mune yakachengeteka uye ine hutano kurongedza. Zvakare, yedu renji inopihwa pamusika inotungamira mitengo uye inogona kuve yakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa nevatengi vedu. Rubatsiro urwu rwuri kugadzira huwandu hukuru hwevatengi vemhando yepamusoro pasirese.
● Smooth kushanda
● Kuderera kuchengetedza
● Pfeka uye bvarura kuramba
Chii chinonzi Preform?
Preform kugadzira kana kuumba chigadzirwa kune yekutanga chimiro uye saizi. Mumashoko akareruka ePET Anogadzira iyo PET (Polyethylene Terephthalate) zvinhu zvinoumbwa kuita chimiro chakaita kunge chakaumbwa kune chimwe chimiro chinozozopedzisira chafuridzirwa kubhodhoro mumushini unoridza.
Kune humwe hunhu hwePET preform, chinova chigadzirwa chakagadzirwa kubva pairi chichava chakajeka uye chakajeka. Iyo yepamusoro inotsvedzerera uye inopenya, iyo inogona kukwezva kutarisisa kwemutengi. Izvi zvinoita kuti PET igadzire chigadzirwa chisina kusimba. Kune rimwe divi, kunyangwe iyo PET preform inogona kugadzira iyo yakafanana manzwiro segirazi. Haina kusimba segirazi. Iwo madziro akasimba uye akaomarara, ayo anoonekwa pamudziyo.
Pashure: 65mm Inodyiwa Oiri Pet Bhodhoro Preform Vagadziri MuChina
Zvadaro: Transparent 26mm mamineral emvura epurasitiki pet bhodhoro preform
45mm Neck Size Plastic Kubika Oiri Bhodhoro Pet P ...